Isiteshi Sokusakaza Se-JW Kuyi-Roku | Okukhona Nosizo
Ingxenye ethi Ezidlalayo yeSiteshi Sokusakaza Se-JW iyefana nethelevishini ngoba ineziteshi eziningi ezinezinto ezihleliwe kakade. Uma ufuna ukuyilawula (okuwukuthi, uma ufuna ukubukela i-video kusukela ekuqaleni futhi ukwazi ukuyimisa kancane, uyibuyisele emuva noma uyise phambili), yiya engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo.
Landela lezi ziqonsiso ukuze uthole okuningi ngangokunokwenzeka Esiteshini Sokusakaza Se-JW esidlala nge-Roku:
Bukela Isiteshi Esidlala Ngokuqhubekayo
Khetha Isiteshi Esihlukile
Sebenzisa Ingxenye Equkethe Iziteshi
Bukela Uhlelo Oludlala Ngokuqhubekayo
Khetha ingxenye ethi Ezidlalayo ekhasini lokuqala leSitesi Sokusakaza Se-JW ukuze uthole uhlu lwazo zonke iziteshi.
Usebenzisa umcibisholo Ongakwesobunxele noma Ongakwesokudla, kuyi-remote yakho ye-Roku, bheka zonke iziteshi ezizovela. Isiteshi esigqamile sivela maphakathi ne-screen futhi sinesithombe, isihloko noma incazelo emfushane. Cindezela u-OK ukuze ukhethe leso siteshi esigqamile.
Njengoba i-video ingena, i-menu izoveza igama lesiteshi nezihloko ze-video edlalayo nezama-video amathathu azolandela.
Icebiso: Uma i-video isingenile futhi ufuna ukuphuma kuyi-menu yesiteshi, ungachofoza umcibisholo Ongakwesobunxele kuyi-remote ye-Roku yakho.
Khetha Esinye Isiteshi
Lapho ubukela isiteshi esidlala ngokuqhubekayo, kunezindlela ezimbili zokushintsha isiteshi:
Buyela emuva lapho uzofike ukwazi ukukhetha khona isiteshi osifunayo
Cindezela umcibisholo Ongakwesobunxele noma inkinobho ekhombe Emuva ukuze ubuyele emuva. Sebenzisa umcibisholo Ongakwesobunxele noma Ongakwesokudla ukuze ubone zonke iziteshi ezizovela. Cindezela u-OK ukuze ukhethe osifunayo.
Bheka kwesinye isiteshi
Njengoba ubukela isiteshi esidlala ngokuqhubekayo, cindezela umcibisholo okhombe Phezulu noma Phansi ukuze uye esiteshini esilandelayo noma esisemuva. Njengoba i-video izodlala, kuzovela igama lesiteshi nesihloko se-video. Cindezela umcibisholo okhombe Phezulu noma Phansi ukuze udlulele kwesinye isiteshi noma ulinde ukuba i-video idlale.
Sebenzisa I-Menu Yesiteshi
Njengoba usabukele isiteshi esidlala ngokuqhubekayo, ungacindezela umcibisholo Ongakwesokudla ukuze uthole i-menu yesiteshi.
Ngaphandle kwegama lesiteshi nezihloko zama-video akhona nasazovela, le menu iqukethe izinto ezimbili, ethi: Idlale Kusukela Ekuqaleni nethi Idlale Iveze Amagama. Sebenzisa umcibisholo okhombe Phezulu noma Phansi ukuze ukhethe okufunayo. Yibe usucindezela u-OK.
Idlale Kusukela Ekuqaleni: Khetha le ngxenye uma ufuna ukubukela i-video engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo. Lapho, ungakwazi ukudlala i-video kusukela ekuqaleni, uyimise kancane, uyibuyisele emuva noma uyise phambili.
Idlale Iveze Amagama: Khetha le ngxenye uma ufuna ukuqala ukudlala i-video ekhona futhi ibhale amagama (uma ekhona) kuwo wonke ama-video asengxenyeni ethi Ezidlalayo noma kwethi Ama-video Athandwayo. Uma ungasathandi kuvele amagama, yiya kuyi-menu futhi bese ucindezela ingxenye ethi Idlale Ingavezi Amagama. (Phawula: Le ngxenye ivela kuphela uma i-video edlalayo inawo amagama.)
Ukuze uphume kuyi-menu yesiteshi, cindezela umcibisholo Ongakwesobunxele, Ongakwesokudla noma inkinobho yokubuyela Emuva.